Wararka - 20'FCL NCL One Step Crystallizer iyo Bellinwax ayaa yimid saamiyada macaamiisha kahor fasaxii Muharram Festival.
20'FCL NCL One Step Crystallizer iyo Bellinwax ayaa yimid keyd macaamiil kahor fasaxii Muharram.
Shaybaarada kiimikada ee Qaranka sidaan u naqaanay NCL, laga soo bilaabo bilowgii bilowgii dabayaaqadii 1940-yadii oo samaynta saabuun iyo shaamboo loogu talagalay ganacsiga qolka qurxinta ee qoyska, ilaa doorka hogaaminta maanta ee warshadaha dayactirka fayadhowrka oo ah shirkad caalami ah oo caalami ah. NCL waxay xarunteedu tahay Philadelphia, Pennsylvania, oo ay ku taalo nus-milyan cag laba jibbaaran wax soo saar iyo xarun hawleed. Waxay u adeegsadaan matoorro waaweyn oo cadaadis sarreeya soo saarista alaabta ceeriin ee maxaabiista ah ee loo isticmaalo in badan oo ka mid ah wax soo saarkeenna. Iyada oo la isku daray tiro ka badan 3 milyan oo galaan oo alaab ceeriin ah iyo alaabooyin dhammaaday, xarunta NCL waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn noocyadeeda Mareykanka. Goobtooda, shaybaarka kombiyuutarka waxaa ka shaqeeya farmashiyeyaal caan ku ah warshadaha, kuwaas oo gacan ka geysta sameynta qaabab cusub oo wax soo saar leh iyada oo la hubinayo in alaabadaasi ay la kulmaan heerarkeena xakamaynta tayada adag.
Shaybaarada Qaranka ee Kiimikooyinka Nidaamyada nadaafadda iyo dayactirka oo dhammaystiran waxay bixiyaan faa'iidada hal khamri dhammaan baahiyahaaga kiimikada ee nadaafadda ah. Hadday tahay dabaqyo adag oo adkeysi leh, dhagax dabiici ah ama daryeelka dhoobada dhoobada ah, daryeelka rooga, barnaamijyada nadiifinta cagaaran, fayadhowrka musqusha, dayactirka warshadaha, dukaamada waaweyn ama adeegga cuntada, waxaa jira barnaamij wax soo saarka NCL ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo waxtarka shaqaalaha iyo in la xakameeyo miisaaniyadda nadiifinta.
Barnaamijka daryeelka dhagaxa TM oo ka socda sheybaarka kiimikada qaranku waa badeecad soo martay sanado badan cilmi baarista dayactirka dusha sare iyo horumarinta kiimikada. Waxaa ka mid ah: buufinta macdanta iyo hannaanka wax lagu nadiifiyo - nidaam loogu talagalay in lagu abuuro marmar dhalaalaysa, dhalaal dhalaalaya uguna sarreeya ee lagu gooyo dhagaxa nuuradda iyo dhulka dhagaxa Nidaamka nadiifinta dhagaxa qoyan - oo loo sameeyay abuurista dhalaalka ugu sarreeya ee marmar, travertine, shiidida dhulka iyo soosaarida dhagaxa nuuradda barnaamijka nadiifinta - nidaam loogu talagalay bixinta dhalaalka iyo dib u soo celinta dhammaan dusha sare ee qalabka granite Alaabada daryeelka miisaanka - habeynta dayactirka iyo ilaalinta ee taayirrada dhalaalaya iyo kuwa aan dillaacin, taayirada la soo saaray, taayirrada saltillo, dhagaxyada Mexico iyo taayirrada kale ee macmalka ah
Waqtiga boostada: Jun-24-2020